Volavolan-dalàna tsy Niraharaha ny Lalàna Tombontsoa sy manan-Danja Indrindra ny Fomba fiasa ao Arabia Saodita - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Volavolan-dalàna tsy Niraharaha ny Lalàna Tombontsoa sy manan-Danja Indrindra ny Fomba fiasa ao Arabia Saodita
Ny Ka ny fironana olana mahaleotena ny lalàna mifehy ny fepetra voalazan'ny bankirompitra fototry ny matanjaka action, indrindra fa bankirompitra dia ny teo aloha efa tafiditra ao ny ara-Barotra ny Lalàna (ny Lalàn'ny Fitsarana ara-Barotra) hampahafantarana ny eo ambanin'ny Mpanjaka Mba Tsy. Haraka ny fepetra mifehy izany tsy fanitarana, ny maha-Saodiana voalohany feno ara-barotra ny lalàna iray manontolo ny toko momba ny fepetra voalazan'ny bankirompitra.
Ny tanjon 'ny fankatoavana ny lalàna mandritra izany fotoana izany, araka ny voalazan'ny ao amin'ny fanazavana fanamarihana ny Arabia Saodita volavolan-tsy niraharaha ny lalàna, dia toy izao manaraka izao: - Hiatrehana ny tsy fahampiana amin'izao fotoana izao ao amin'ny fitondram-panjaka azo ampiharina ny lalàna ny alalan' ny fampiharana ny feno lalàna misimisy ny insolvency ny ara-barotra sy ara-toekarena ny orinasa.
Amporisiho ny fanaovana ny asa sy ny tetikasa amin'ny alalan'ny mahomby bankirompitra lalàna amin'ny lalana ara-bola ny fandaminana indray ny insolvent orinasa - Hanampy ny insolvent mpitrosa na bankirompitra mba hanarenana ny toe-javatra amin'ny alalan'ny amicable ponenana ny trosa izay dia hitehirizany ny zo sy ny mandefa ny azy indray ny fanatanjahan-tena ara-toe-karena raharaham-barotra. Manamafy ny fahatokiana ao ny sary nahazoan-tsena ary ny fifanakalozana ara-bola amin'ny alalan'ny mamoaka lalàna ny soso-kevitr'izy ny zon'ny rehetra ny trosa. Hahafahan'ny dalàna ny ara-bola amin'ny sehatry ny lalàna amin'ny insolvent na bankirompitra-bahoaka ny fikambanana amin'ny fomba mifanaraka amin'ny natiora ny tsirairay sehatry sy ny mifandray amin'ny loza mety hitranga. Ankoatra izany, ny volavolan-tsy niraharaha ny lalàna napetraka ny fomba fiasa mifehy ny toe-panahy sy ny fananan'ny mpitrosa izay miatrika insolvency na tsy mahavita mandoa ny trosa.
Ireo fomba fiasa manome ny mpitrosa miaraka amin'ny fahafahana mba hanarenana ny toe-javatra sy ny miroso amin'ny raharaham-barotra raha tsy manohintohina ny zon'ny tompon-trosa.
Fomba toy izany dia toy izao manaraka izao: - fandaminana indray fomba ny: Dia ny hanaovana ilay fandidiana nanokatra ny fitsarana teo amin ny fangatahan'ny mpitrosa na ny fahefana mahefa na amin'ny alalan'ny misy tompon-trosa raha toa ny mpitrosa ny zavatra niainany ny fahasahiranana ara-bola. Ny fandaminana indray ny fomba mitovy amin'ny fisorohana ponenana fomba izay teo aloha dia manome anjara toerana lehibe amin'ny trosa sy ny fitsarana nandritra ny teny ao aminy anisan'izany inhibiting ny mpitrosa avy transacting ny na ny fananana toy izany dia ho noraisiny b - Fisorohana Ponenana fomba ny: Dia manomboka misokatra amin'ny fitsarana eo amin 'ny fangatahan'ny mpitrosa na ny fahefana mikasika ny fanaraha-maso ny asa ampiasaina amin' izany. Izany dia manomboka manome fahafahana ny mpitrosa mba hanorim-ponenana ny trosa amin'ny tompon-trosa mifototra amin'ny ponenana tolo-kevitra. Ny mpanao lalàna obligates misy sokajy ny tompon-trosa mba hanaraka ny ponenana ny tolo-dalàna, na dia tsy miombon-kevitra, raha ny fepetra ara-dalàna afa-po. Ankoatra izany, ny mpanao lalàna mamela ny fampiatoana ny trosa' fitarainana manohitra ny mpitrosa eo ambany fanapahan-kevitra ho nataon ny fitsarana mahefa. c - Fanafoanana ny paika: Dia manomboka misokatra amin'ny fitsarana eo amin ny fangatahan'ny mpitrosa na ny fahefana mahefa na amin'ny alalan'ny misy tompon-trosa raha toa ny mpitrosa ny zavatra niainany ny olana ara-bola aho. miatrika insolvency na tsy niraharaha na dia tsy misy ny tena fahafahana mba hanarenana ny ara-bola ny toe-piainana sy soa araka izany, dia avy ny fisorohana ponenana sy ny fandaminana indray ny fomba fiasa izay ny volavolan-dalàna mikendry mba hanafainganana sy hanamorana ny fanafoanana ny fomba fiasa. Ho an'ny olona izay manaiky ny volavolan-tsy niraharaha ny lalàna, toy izany volavolan-dalàna mihatra juridical sy ny ara-boajanahary ny olona izay mampiasa ny fandraharahana sy hampitombo ny fampiasam-bola sy ny ho matihanina tetikasa. Orinasa vahiny, fa ny fanatanjahan-tena raharaham-barotra ao anatin'ny fitondram-panjaka omena, na dia izany aza anefa, fa (fampiharana dia ho ferana amin'ny toe-bola misy ao amin'ny fitondram-panjaka). Ny vokatry ny firosoana ny amin'ny fomba arahina voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna: Ny volavolan-dalàna manome toerana manokana ny fiantraikany teo amin'ny firosoana ny fitsarana voalaza ao amin'ny tanjona ny fanatrarana ny tanjon'ny tsirairay. Ny zava-dehibe indrindra vokatry ny fitsarana voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna tsy niraharaha ny lalàna dia toy izao manaraka izao: - ny Fampiatoana ny Milaza: Tamin'ny tranga manokana, ny lalàna mamela ny fampiatoana ny filazana nanangana ny tompon-trosa mba hiarovana ny mpitrosa s sy ny fananana harena nandritra ny mahomby fe-potoana fitsarana mba manome ny mpitrosa ny fahafahana mba hanarenana ny toe-javatra, ary manome ponenana tolo-kevitra na ara-bola ny fandaminana indray. ny fitantanam-Bola Vaovao: ny volavolan-dalàna mamela ny mpitrosa mba hahazoana ny fitantanam-bola na vaovao findramam-bola mandritra ny fe-ponenana na ara-bola ny fandaminana indray ny fomba raha toy izany findramam-bola na ny fitantanam-bola dia ilaina ny fampiharana ponenana tolo-dalàna sy ara-bola ny fandaminana indray. Na izany aza, noho ny fahasarotana ny fahazoana ny findramam-bola noho ny mpitrosa mandritra izany dingana, ny fahazoana ny findramam-bola dia iharan'ny fankatoavan'ny fitsarana. Fanohizana ny Fifanarahana: eo Anivon ny zavatra izay manan-danja rakotry ny volavolan-tsy niraharaha ny lalàna, izay mampihena ny tsirairay ny mpiantoka miaraka amin'ny mpitrosa amin'ny fampiharana ny safidy ny fifanekena anisan'izany ireo famaranana ny fifanarahana eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpitrosa s asa. Ankoatra izany, ny volavolan-dalàna manome ny mpitrosa ny zo manavao na ny fifanarahana dia manapa-kevitra ny hiroso ahiahy na ireo izany terminates. ny Mpitrosa s Zo amin'ny Antoko Fahatelo: ny volavolan-dalàna voafaritra ny fomban ny fiatrehana ny mpitrosa s zo amin'ny antoko fahatelo raha tsy manaiky ny rehetra ny fepetra voalazan'ny rehetra eo aminy.
Noho izany, raha toa ny mpitrosa dia ny zo amin'ny antoko fahatelo, na ny notendrena liquidator, amin'ny toe-javatra izay ny mpitrosa dia nesorina ny fitantanana, dia tsy maintsy manomboka ny milaza fa ny vokany, ny tranga izay ny fitsarana mahefa dia izay ny fahefana manokana raha tsy izany filazana hitsangana avy na mifandray akaiky amin'ny bankirompitra ny asa izay fahefana dia natao ny mahay dia tsy niraharaha ny fitsarana.
Mametraka Ponenana amin'ny Trosa: Eo amin'ny politika noraisin'ny ny volavolan-dalàna fa ny tompon-trosa dia voatery tsy maintsy nanatanteraka izany na amin'ny ponenana tolo-dalàna na ny ara-bola ny fandaminana indray. Ny volavolan-bankirompitra lalàna izay nifehy ny notsorina ny fomba fiasa mifehy ny kely izay meloka taminay' voafetra ny sandan'ny fananana, anisan'izany ny fisorohana ponenana fomba kely mpitrosa ny ara-bola ny fandaminana indray ny fomba kely izay meloka taminay ary fanafoanana fomba kely izay meloka taminay.
Ankoatra izany ny voalaza etsy ambony, ny volavolan-dalàna io ny fomban ny fiatrehana ny zava-poana-pananana ny fanafoanana ny raharaham-panjakana, lisitra sy ny fiarovana ny mpitrosa s fananana sy ny fananany sy ny fiarovana ny tompon-trosa ny zon'olombelona.
Ankoatra izany, ny volavolan-dalàna io ihany koa ny mpitrosa s fitondran-tena, ny fanarenana ara-bola sy ny sazy toy ny voalaza ny toe-javatra izay ny birao ny mpikambana sy ny mpanatanteraka ny fitantanana mihevitra madio manokana ho an'ny fanitsakitsahana ny foto-kevitry ny orinasa ara-bola ny fananany. Ny volavolan-dalàna no mampiavaka ny tena bankirompitra, ny mpitrosa ao amin'ny toerana misy anao sy ny hosoka mpitrosa Noho izany, ny volavolan-dalàna no tsy hanafay ny mpitrosa ao amin'ny finoana tsara raha toa ny mpitrosa ao default hoatran'ny manokana an-trano madio sy ny hosoka mpitrosa hoatran'ny olon-tsotra sy mpanao heloka bevava ny madio ary ny tsy fampiharana ny panjakana misy asa na inona na inona fananganana. Disclaimer: Raha ny ezaka rehetra natao mba ho azo antoka ny fahamarinan'ny boky ity izao, dia tsy natao ho ara-dalàna manome toro-hevitra amin'ny maha-olona ny toe-javatra dia tsy mitovy ary tokony ho niresaka tamin'ny manam-pahaizana manokana ary na ny mpisolo vava.
Maimaim-poana Torohevitra araka ny Lalàna - emirà arabo mitambatra
Bepul yuridik maslahat Suriya Arab Respublikasi
© 2021 Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.